Ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ, ndị na-eweta ngwaahịa - ndị na-emepụta ngwaahịa ahụike China
Ngwa Ngwa Ngwa ahụike
Ngwá ọrụ Maka akụkụ ahụike
Ihe Nlebanya Ịkpụzi Ngwa Ngwa Plastic Injection: Ngwá ọrụ maka akụkụ ahụike bụ usoro dị oke egwu ebe oke ọdịda dị elu. Dị ka nke a, a ghaghị iburu n'uche ọtụtụ ihe n'oge nhazi, nhazi na mmepụta ihe. Ndị a gụnyere: Iwu FDA…
Akpụkpọ Plastic Maka Ngwa Ọgwụ
JS MOLD Mold specializes na elu plastic ebu maka ọgwụ ngwá ọrụ, nkwakọ na teknuzu ngwaọrụ industries.We nakwa ọrụ automotive, general ulo oru na n'ji ngwaahịa ụlọ ọrụ.
Ụlọ ọrụ na-emepụta plastik nke kacha ere ngwaahịa
JS MOLD Mold.a factory specialized na ebu ime na plastic ịkpụzi, hụrụ na China na 2011. n'ime afọ gara aga, anyị na-na-enye iche iche ebu na injection kpụrụ akụkụ maka ndị ahịa anyị na elu àgwà na obere time.Our pụrụ iche nka. na mgbagwoju na ukwuu teknuzu…
Akpụkpọ anụ ahụike plastik
Ọgwụ Injection Molding JS MOLD Mold nwere ụlọ ọrụ ịgbanye ntụtụ rọba ọgbara ọhụrụ dị maka ọrụ akụkụ ịkpụzi ahụike gị. Anyị maara na àgwà bụ ihe kacha mkpa ma anyị na-eji nkwa ahụ akpọrọ ihe. Anyị bụ onye ndu dị ọnụ ala maka ebu ahụike dị elu…
Onye na-emepụta injection injection plastik
JS MOLD Mold bụ ọkachamara plastic injection ebu onye chọta na South China, anyị na-elekwasị anya na-eme ka niile injection ebu na metụtara ụgbọ elu, ọgwụ ngwaọrụ akụkụ, consumer electronic, ụlọ ọrụ ngwa, ezinụlọ ngwa, ụlọ ọrụ, Commodity etc.we e na-ejere anyị ozi. ndị ahịa…
Akụkụ dị n'ihu na azụ plastik
Aha ngwaahịa: Plastic Ihu na Back Parts Design
Ngwa ngwa: Solidworks/PROE/UG/CAD.ETC.
Ndụ ebu: 100,000-300,000mkpụrụ ebu
Ihe: S136/2344/718/738/NAK80/P20 Ọghe: Otu/Otu oghere Nnyefe…
Ihe mkpuchi rọba maka ngwaahịa ahụike JS MOLD Mold bụ onye na-emepụta ihe na-emepụta ihe site na plastik. Dị na kacha 1300 ton clamping ike. Plastics dị iche iche gụnyere PTFE, PEEK, polymer, PVDF, PVC, CPVC, PPS, ETFE, polypropylene na PFA. Ụlọ ọrụ ndị a na-enye gụnyere ikuku, kemịkalụ na nri…
Medical Plastic Parts soplaya
Ebu bụ ihe ISO9001: 2015 certificated ahụmahụ factory ilekwasị anya na-emepe emepe, imewe na n'ichepụta plastic injection ebu na kpụrụ akụkụ maka Medical plastic akụkụ maka ule akụrụngwa, eze, ngwaọrụ ahụike na laabu ngwaahịa. Ike: a. Ebube maka ahụike…
Igwe plastik agbanyere
JS MOLD Mold na-enye injected plastic ebu, gụnyere ụdị ọgwụ na ahụike akụrụngwa plastic akụkụ ebu, nyochaa plastic ụlọ, dọkịta eze akụrụngwa ebu ebu wdg .. Mgbe ọ bụla ị na-abịakwute anyị, anyị na-mgbe ọsọ usoro iji hụ na ị imeri oge & price nsogbu. ma zute gị…
Ngwa Ngwa Ngwa Ọgwụ Akpụzi Factory Mere na China
Oghere dị iche iche na mgbanwe mgbanwe bụ isi njirisi maka imepụta akụrụngwa akụrụngwa ọgwụ. JS MOLD ebu usoro na-enye anyị ohere ịmepụta ebu ndị nwere ike ijide CPK chọrọ maka ụlọ ọrụ ahụike. na-ewulite ngwungwu ihe dị iche iche maka mgbakọ ngwaọrụ ahụike zuru oke…
Ngwá ọrụ China Maka akụkụ ngwa ahịa kwa ụbọchị
JS MOLD Mold bụ ngwá ọrụ na onye na-emepụta ihe dị na GuangDong China. Anyị na-elekwasị anya na nkenke tooling nke Medical Devices ebu, ụgbọ ala, ngwa ụlọ na ndị ọzọ ubi. na ọgaranya ahụmahụ na-eme injection ngwaahịa uka mmepụta dị ka nke ọma. ODM ma ọ bụ OEM abụọ dị. ODM: anyị nwere…
Akụkụ eletrọnịkị bọtịnụ ebu
Aha ụlọ ọrụ:Thinkbus Kalung(Dongguan) Onye nrụpụta co., Ltd (JS MOLD Mold) Ụdị azụmahịa: Onye nrụpụta isi ngwaahịa: CNC Milling, Plastic Mold/Tooling, Prototype,Injection Molding Product, Injection Foaming Mold, 3D Printing, Die Casting, Gas Enyere aka na ịkpụzi injection dị ka akụkụ maka akpaaka, ahụike,…
12Peeji nke 1/2Peeji nke 1/2 KPỌTỤRỤ ANYỊ
Ajụjụ maka ọnụahịa ọnụahịaAjụjụ maka ọnụahịa ọnụahịa